प्याजकाे मनलाग्दी भाउ, पहिलाे तल्लाबाट दाेस्राे तल्लामा पुग्दा ८० बाट १५० रुपैयाँ ! – Makalukhabar.com
मकालु खबर	 २०७७ आश्विन १ गते प्रकाशित 109
काठमाडौं । हरित सामुदायिक कृषि बजार तीनकुनेमा तरकारी बिक्री गर्दै आएकी नाज्दा अञ्जुले बिहीबार बिहान १५० रुपैयाँ किलोमा प्याज बेचिन् । उनले त्यो प्याज तल्लो तलाका होलसेल व्यापारी शालिकराम दुलालबाट किनेकी थिइन् ।
त्यो प्याज शालिकरामले कति मूल्यमा किने त ? बिल भेटिएन । उनी आफूले फरक-फरक समयमा कहिले ६५ रुपैयाँमा र कहिले ७० रुपैयाँमा किनेको बताइरहेका थिए । ‘गाडीमा प्याज बोकेर आउँछन् । बेच्छन् । पैसा लिएर जान्छन् । उनीहरु बिल नै दिँदैनन्,’ दुलालको भनाइ थियो । यति सोधखोज गर्दा अनुगमन टोली हो भन्ने थाहा पाएर नाज्दाले किलोको ५० रुपैयाँ घटाएर १०० रुपैयाँमा प्याज बिक्री गर्न थालिन् । यो कारोवारमा कसैले बिल लिए वा दिएको छैन ।
यसरी सञ्चालन गरिएकामध्ये आजबाट ३ वटा होलसेल पसलको कारोबार रोक्का गरिएको छ । महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोलीले महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुनेका प्रहरी नायव निरीक्षक बिनोद बिक्रम बस्नेत, सहकारीका कार्यकारी प्रमुख कोमलचन्द्र बरालको रोहबरमा, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट लिखित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति नलिएसम्मका लागि कारोबार रोक्का गरेको हो ।
प्याजको भाउ बढेपछि कहाँबाट प्याज ल्याउने भनेर सोचिरहेका बेला कालीमाटीका व्यापारीले प्याज पठाइदिएको त्यहाँका तीनकुनेका व्यापारीको भनाइ छ । ‘पछि हामीले थाहा पायाैँ । हिजै कालीमाटी र बल्खुमा अनुगमन भएको रहेछ’, उनीहरुले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘प्याज पठाए तर बिल पठाएनन् । हामी आफैँ अन्यौलमा छौँ । उनीहरुले गर्दा हामी पो फस्याैँ ।’